လျှပ်စစ်အပူကို Socks Foot နှိပ်ပူနွေး Socks များ - ဟင်းသီးဟင်းရွက်ခရု Slicer လိမ်, ရေခဲပြင်အိုး, Chilling condiments ဆာဗာ Homewares ပေးသွင်း
lounging တူသောမိုးလုံလေလုံ & ပြင်ပလှုပ်ရှားမှုများများအတွက်ဂရိတ်, ငါးဖမ်းခြင်းစခန်း, စနိုးဘုတ်စီးခြင်း, အမဲလိုက်, တောင်တက်:2အားပြန်သွင်းနိုင်ဘက်ထရီတပ်ဆင်ထားပြီး soft အပူခြေအိတ်, (အထူးသဖြင့်နာတာရှည်အအေးမိခွ) တနေ့လုံးနွေးမည်သည့်အခါသမယများအတွက် winter.Suitable ထဲ၌နောက်တဖန်မအအေးခွကေိုသငျသညျစောငျ့ရှောကျ။ ပင်တဲ့အခါမှာစိုစွတ်သောရှော့ခ်မည်မဟုတ်!
အမျိုးအစား:ခြေမနှိပ်ခံ, လျှပ်စစ်အပူကို Socks
လျှောက်လွှာ:အေးမိုးလုံလေလုံ & ပြင်ပလှုပ်ရှားမှုများ
လဲမှို့, breathable, အမြန်-ခြောက်သွေ့၏ လုပ်. , elastic thickened, ပျော့ပျောင်းသောတိတ်တဆိတ်သင်၏ခြေကိုပြုစုစောင့်ရှောက်
အပူဧရိယာပိုမိုမြန်ဆန်မြင့်တက်ခန့် 1 တစ်မိနစ်အတွင်းနွေးရခြေကောင်းတဲ့နှင့် toasty ရ
lounging, ငါးဖမ်းခြင်းစခန်း, စနိုးဘုတ်စီးခြင်း, အမဲလိုက်, တောင်တက်နဲ့တူမိုးလုံလေလုံ & ပြင်ပလှုပ်ရှားမှုများအဘို့ကြီးသော။ ပင်တဲ့အခါမှာစိုစွတ်သောရှော့ခ်မည်မဟုတ်!
တံငါ, စက်ဘီးစီးသူ, တောင်တက်သမား, သက်ကြီးရွယ်အိုများ, rheumatisant, slider ကိုနှင့်ပိုပြီးများအတွက်သင့်လျော်သော။ ဆောင်းရာသီတွင်အဘယ်သူမျှမကပိုချမ်းအေးပေတနေ့လုံးနွေးသငျသညျကိုသိမ်းဆည်းထားပါ